ပလက်ဝတွင် AA အခြေချမှု အစိုးရနှင့် CNF တို့ အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူဖြေရှင်းသင့်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးဆောင်အဖွဲ့ပြော - Khonumthung Media Group
You are at:Home»Headline»ပလက်ဝတွင် AA အခြေချမှု အစိုးရနှင့် CNF တို့ အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူဖြေရှင်းသင့်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးဆောင်အဖွဲ့ပြော
By admin on	 May 12, 2020 Headline
ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) အခြေချနေထိုင်သည့်ကိစ္စကို နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး (CNF) တို့မှ အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူဖြေရှင်းသင့်သည် ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မ တီ ( Chin Peace and Tranquility Committee –CPTC) ကပြောဆိုလိုက်သည်။
ရက္ခိုင့်တပ်တော် (AA) တပ်ဖွဲ့များ ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် အခြေချနေထိုင်ခြင်းသည် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့တွင် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းဆောင်ရေးကော်မတီနှင့် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး (CNF) တို့ ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စုအဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ၏ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်အပိုဒ် (၈)(ဂ) ပါရှိသော “ချင်းပြည်နယ်အတွင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်၊ အစိုးရ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ချင်းအမျိူးသားတပ်မတော် (CNA) တို့သာ နေရာချထားခွင့်ပြုရန်သဘောတူသည်” ဆိုသည့်အချက်ကို မတရားချိူးဖောက်ရာရောက်သည့်အတွက် ထိုကိစ္စကို တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သော နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့် CNF တို့မှ အမြန်ဆုံး တာဝန်ယူဖြေရှင်းသင့်သည်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီ၏ မေလ ၈ ရက်နေ့ကထုတ်ပြ န်သော ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး Rev. Tluang Ceu က “ချင်းပြည်နယ်သမိုင်းမှာ အဆိုးဝါးဆုံးအခြေအနေရောက်နေတယ်၊ ချင်းပြည်နယ်မှာ ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေ CNF နဲ့ အစိုးရတပ်လည်းပဲ တိုက်ပွဲတွေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်မရှိခဲ့ဘူး တခြားတိုက်ပွဲတွေလည်းမရှိခဲ့ဘူး အခုတော့ AA တွေနဲ့ အစိုးရတပ်နဲ့ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ ချင်းပြည်နယ်သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ဒီလောက်ထိ ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေ မရှိခဲ့ဖူးဘူး ဒီအခြေအနေကို ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာ တော်တော်စဉ်းစားလို့ခက်တယ် ကျနော်တို့ဆိုလိုချင်တာက CNF နဲ့ အစိုးရက တကယ့်ကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ ချင်းပြည်နယ်ကနေ AA ကို နှင်ထုတ်ဖို့ကတော့ အဓိကကျတယ်လို့မြင်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ချင်းပြည်နယ် ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်တော်(AA) တို့အကြား ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကစ၍ တိုက်ပွဲဖြစ် ပွားလာသည်မှာ (၅) နှစ်ခန့်ကြာမြင့်လာပြီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် တိုက်ပွဲပိုမိုပြင်းထန်လာသောကြောင့် ပလက်ဝမြို့နယ်မှ အပြစ်မဲ့ပြည်သူ (၅၀) ဦးခန့်သေဆုံးခဲ့ပြီး လူဦးရေ (၆၇၅၇) မိသားစု (၁၅၅၀) စုတို့သည် မိမိနေရပ်ကို စွန့်ခွါကာ စစ်ဘေး ရှောင် ဒုက္ခသည်များအဖြစ် ပလက်ဝမြို့နှင့် ဆမီးမြို့တို့တွင် ခက်ခက်ခဲခဲနေထိုင်ခိုလုံနေကြရသည်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီကပြောသည်။
ချင်းငြိမ်းချမ်းရေး အကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီ၏ ကြေညာချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး(CNF) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းထက်နီက “ချင်းပြည်နယ်မှာ AA မရှိဖို့က ချင်းလူမျိုးတိုင်းမှာ ရှိနေတဲ့ ဆန္ဒပါပဲ၊ CNF ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ထပ်တူပါပဲ၊ AA အနေနဲ့ ဒါကို ထည့်မတွက်ဘူး ဆိုယင်တော့ ဖြစ်လာမည့် ပြသနာ ဆိုးကျိုးက အားလုံးအတွက် မကောင်းဘူး” ဟုပြောသည်။
ပလက်ဝမြို့နယ်အတွင်း တပ်မတော်နှင့် AA အကြားတိုက်ပွဲကြောင့် ကျေးရွာများပျက်စီးခြင်း၊ အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ သေဆုံး၊ ဒဏ်ရာရရှိခြင်းနှင့် အခြားသော ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း ဖမ်းဆီးခြင်းများ ခံစားကြုံတွေ့နေရခြင်းသည် ချင်းလူမျိူးများ၏ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် မကြုံစဘူးသောအဆိုးဝါးဆုံးဖြစ်ပျက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး တိုက်ပွဲကြောင့် သေဆုံးသွားကြသည့် အပြစ်မဲ့ပြည်သူများ၊ ဒဏ်ရာရရှိသူများ နှင့် စစ်ဘေးရှောင် ဒုက္ခသည်များအတွက် လျှော်ကြေးမှအစ၊ ၎င်းတို့၏ စားဝတ်နေရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လုံခြုံရေးနှင့် နေရပ်တွင် လုံခြုံစွာပြန်လည်နေထိုင် လုပ်ကိုင်စားသောက်နိုင်ရေး စသည့် ကိစ္စအ၀၀အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ တာဝန်ရှိရှိ၊ တာဝန်သိသိဖြင့် တာဝန်ယူဆောင် ရွက်ပေးသင့်သည်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီ၏ ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် AA တပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် တိုက်ပွဲများရပ်ဆိုင်းပြီး ယခုလက်ရှိ တစ်ကမ္ဘာလုံး ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနေကြရသည့် ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်၊ ထိန်းချူပ်၊ကုသရေးလုပ်ငန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ဆောင်သင့်သည်ဟု ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီက တိုက်တွန်းထားသည်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချူပ်ရုံးကတော့ ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ကာကွယ်၊ ကုသရေးနှင့် ထိန်းချူပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ဟုဆိုကာ ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များနှင့် မေလ ၁၀ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ ၃ လကျော်အပစ်အခတ်ရပ်စဲမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။
ချင်းငြိမ်းချမ်းရေးအကျိူးတော်ဆောင်ကော်မတီသည် ချင်းအမျိူးသားတပ်ဦး (CNF) နှင့် အစိုးရအကြား ပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးအတွက် ကြားဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့်အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးသဘောတူညီချက် စာချူပ်တွင်လည်း အသိသက်သေအဖြစ် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည့်အဖွဲ့သည်။
ထို့အပြင် အဆိုပါသဘောတူညီချက်စာချူပ်ပါအချက်များ နှစ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ လိုက်နာမှုရှိမရှိ လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းကိုလည်း ဆောင်ရွက်နေသည့်အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) အခွခေနြထေိုငျသညျ့ကိစ်စကို နိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့ ခငျြးအမြိူးသားတပျဦး (CNF) တို့မှ အမွနျဆုံး တာဝနျယူဖွရှေငျးသငျ့သညျ ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမ တီ ( Chin Peace and Tranquility Committee –CPTC) ကပွောဆိုလိုကျသညျ။
ရက်ခိုငျ့တပျတျော (AA) တပျဖှဲ့မြား ပလကျဝမွို့နယျတှငျ အခွခေနြထေိုငျခွငျးသညျ ၂၀၁၂ ခုနှဈ ဒီဇငျဘာလ ၉ ရကျနကေ့ ရနျကုနျမွို့တှငျ ပွညျထောငျစုငွိမျးခမျြးရေးလုပျငနျးဆောငျရေးကျောမတီနှငျ့ ခငျြးအမြိူးသားတပျဦး (CNF) တို့ ဒုတိယအကွိမျပွညျထောငျစုအဆငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးဆှေးနှေးပှဲ၏ စဈဘကျဆိုငျရာ သဘောတူညီခကျြအပိုဒျ (၈)(ဂ) ပါရှိသော “ခငျြးပွညျနယျအတှငျး၊ မွနျမာ့တပျမတျော၊ အစိုးရ လကျနကျကိုငျအဖှဲ့အစညျးမြား နှငျ့ ခငျြးအမြိူးသားတပျမတျော (CNA) တို့သာ နရောခထြားခှငျ့ပွုရနျသဘောတူသညျ” ဆိုသညျ့အခကျြကို မတရားခြိူးဖောကျရာရောကျသညျ့အတှကျ ထိုကိစ်စကို တိုကျရိုကျသကျဆိုငျသော နျိုငျငံတျောအစိုးရနှငျ့ CNF တို့မှ အမွနျဆုံး တာဝနျယူဖွရှေငျးသငျ့သညျဟု ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမတီ၏ မလေ ၈ ရကျနကေ့ထုတျပွ နျသော ကွညောခကျြတှငျဖျောပွထားသညျ။
ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး Rev. Tluang Ceu က “ခငျြးပွညျနယျသမိုငျးမှာ အဆိုးဝါးဆုံးအခွအေနရေောကျနတေယျ၊ ခငျြးပွညျနယျမှာ ဒီလိုတိုကျပှဲတှေ CNF နဲ့ အစိုးရတပျလညျးပဲ တိုကျပှဲတှကွေီးကွီးကယျြကယျြမရှိခဲ့ဘူး တခွားတိုကျပှဲတှလေညျးမရှိခဲ့ဘူး အခုတော့ AA တှနေဲ့ အစိုးရတပျနဲ့ တိုကျပှဲတှဖွေဈလာတဲ့အခါမှာ ခငျြးပွညျနယျသမိုငျးတဈလြှောကျလုံးမှာ ဒီလောကျထိ ဆိုးဝါးတဲ့အခွအေနေ မရှိခဲ့ဖူးဘူး ဒီအခွအေနကေို ဘယျလိုဖွရှေငျးမလဲဆိုတာ တျောတျောစဉျးစားလို့ခကျတယျ ကနြျောတို့ဆိုလိုခငျြတာက CNF နဲ့ အစိုးရက တကယျ့ကိုတာဝနျယူပွီးတော့ ခငျြးပွညျနယျကနေ AA ကို နှငျထုတျဖို့ကတော့ အဓိကကတြယျလို့မွငျတယျ” ဟု ပွောသညျ။
ခငျြးပွညျနယျ ပလကျဝမွို့နယျတှငျ မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ ရက်ခိုငျ့တပျတျော(AA) တို့အကွား ၂၀၁၅ ခုနှဈကစ၍ တိုကျပှဲဖွဈ ပှားလာသညျမှာ (၅) နှဈခနျ့ကွာမွငျ့လာပွီဖွဈပွီး ၂၀၂၀ ခုနှဈတှငျ တိုကျပှဲပိုမိုပွငျးထနျလာသောကွောငျ့ ပလကျဝမွို့နယျမှ အပွဈမဲ့ပွညျသူ (၅၀) ဦးခနျ့သဆေုံးခဲ့ပွီး လူဦးရေ (၆၇၅၇) မိသားစု (၁၅၅၀) စုတို့သညျ မိမိနရေပျကို စှနျ့ခှါကာ စဈဘေး ရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအဖွဈ ပလကျဝမွို့နှငျ့ ဆမီးမွို့တို့တှငျ ခကျခကျခဲခဲနထေိုငျခိုလုံနကွေရသညျဟု ခငျြးငွိမျးခမျြးရေး အကြိူးတျောဆောငျကျောမတီကပွောသညျ။
ခငျြးငွိမျးခမျြးရေး အကြိူးတျောဆောငျကျောမတီ၏ ကွညောခကျြနှငျ့ပတျသကျ၍ ခငျြးအမြိူးသားတပျဦး(CNF) ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဆလိုငျးထကျနီက “ခငျြးပွညျနယျမှာ AA မရှိဖို့က ခငျြးလူမြိုးတိုငျးမှာ ရှိနတေဲ့ ဆန်ဒပါပဲ၊ CNF ရဲ့ သဘောထားနဲ့ ထပျတူပါပဲ၊ AA အနနေဲ့ ဒါကို ထညျ့မတှကျဘူး ဆိုယငျတော့ ဖွဈလာမညျ့ ပွသနာ ဆိုးကြိုးက အားလုံးအတှကျ မကောငျးဘူး” ဟုပွောသညျ။
ပလကျဝမွို့နယျအတှငျး တပျမတျောနှငျ့ AA အကွားတိုကျပှဲကွောငျ့ ကြေးရှာမြားပကျြစီးခွငျး၊ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား သဆေုံး၊ ဒဏျရာရရှိခွငျးနှငျ့ အခွားသော ညှငျးပနျးနှိပျစကျခွငျး ဖမျးဆီးခွငျးမြား ခံစားကွုံတှနေ့ရေခွငျးသညျ ခငျြးလူမြိူးမြား၏ သမိုငျးတဈလြှောကျတှငျ မကွုံစဘူးသောအဆိုးဝါးဆုံးဖွဈပကျြမှုတဈခုဖွဈပွီး တိုကျပှဲကွောငျ့ သဆေုံးသှားကွသညျ့ အပွဈမဲ့ပွညျသူမြား၊ ဒဏျရာရရှိသူမြား နှငျ့ စဈဘေးရှောငျ ဒုက်ခသညျမြားအတှကျ လြှျောကွေးမှအစ၊ ၎င်းငျးတို့၏ စားဝတျနရေေး၊ ကနျြးမာရေး၊ ပညာရေး၊ လုံခွုံရေးနှငျ့ နရေပျတှငျ လုံခွုံစှာပွနျလညျနထေိုငျ လုပျကိုငျစားသောကျနိုငျရေး စသညျ့ ကိစ်စအဝ၀အတှကျ နိုငျငံတျောအစိုးရမှ တာဝနျရှိရှိ၊ တာဝနျသိသိဖွငျ့ တာဝနျယူဆောငျ ရှကျပေးသငျ့သညျဟု ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမတီ၏ ကွညောခကျြတှငျဖျောပွထားသညျ။
မွနျမာ့တပျမတျောနှငျ့ AA တပျဖှဲ့အနဖွေငျ့ တိုကျပှဲမြားရပျဆိုငျးပွီး ယခုလကျရှိ တဈကမ်ဘာလုံး ရငျဆိုငျဖွရှေငျးနကွေရသညျ့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျ၊ ထိနျးခြူပျ၊ကုသရေးလုပျငနျးတှငျ ပူးပေါငျးပါဝငျလုပျဆောငျသငျ့သညျဟု ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမတီက တိုကျတှနျးထားသညျ။
တပျမတျောကာကှယျရေးဦးစီးခြူပျရုံးကတော့ ကမ်ဘာ့ကပျရောဂါ COVID-19 ကာကှယျ၊ ကုသရေးနှငျ့ ထိနျးခြူပျရေးလုပျငနျးမြားကို ကယျြပွနျ့စှာဆောငျရှကျနိုငျရနျအတှကျဟုဆိုကာ ပွညျတှငျးတိုငျးရငျးသားလကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့မြားနှငျ့ မလေ ၁၀ ရကျနမှေ့ သွဂုတျလ ၃၁ ရကျနအေ့ထိ ၃ လကြျောအပဈအခတျရပျစဲမညျဖွဈကွောငျး ထုတျပွနျကွညောခဲ့သညျ။
ခငျြးငွိမျးခမျြးရေးအကြိူးတျောဆောငျကျောမတီသညျ ခငျြးအမြိူးသားတပျဦး (CNF) နှငျ့ အစိုးရအကွား ပွနျလညျသငျ့မွတျရေးအတှကျ ကွားဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးခဲ့သညျ့အဖှဲ့ဖွဈပွီး အပဈအခတျရပျဆဲရေးသဘောတူညီခကျြ စာခြူပျတှငျလညျး အသိသကျသအေဖွဈ ပါဝငျလကျမှတျရေးထိုးခဲ့သညျ့အဖှဲ့သညျ။
ထို့အပွငျ အဆိုပါသဘောတူညီခကျြစာခြူပျပါအခကျြမြား နှဈဖကျအဖှဲ့အစညျးမြားမှ လိုကျနာမှုရှိမရှိ လလေ့ာစောငျ့ကွညျ့ရေးလုပျငနျးကိုလညျး ဆောငျရှကျနသေညျ့အဖှဲ့ဖွဈသညျ။